Jowhar :Wasiirada dowladda u dirtay oo kulamo wada tashi ka socdo – idalenews.com
Jowhar :Wasiirada dowladda u dirtay oo kulamo wada tashi ka socdo
Idalenews:Wasiiro ka tirsan dowladda Federaalka oo shalay ku baxay xiisada ka taagan Maamulka Hirshabeelle ayaa kulamo la qaatay dhinacyada ay quseyso xiisada, iyadoo lagu wado in gelinka dambe ee maanta ay Wasiiradan dib ugu soo laabtaan magaalada Muqdisho.
Wasiirada ayaa la kulmay Sii hayaha xilka Madaxweynaha ahna Madaxweyne kuxigeenka Hirshabeelle Cali Guudlaawe, Guddoonka Baarlamaanka iyo Xildhibaanada, waxayna kala hadleen xiisada ka dhalatay xil ka qaadista Madaxweynihii hore.
Sidoo kale wasiirada ayaa la kulmay Odayaasha dhaqanka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada, waxayna iyana isla soo qaadeen arrimaha xiisada iyo sidii xal loogu heli lahaa.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabeelle Sheekh Cusmaan Barre ayaa u sheegay Wasiirada in wax khilaaf ah uusan u dhaxeyn Xildhibaanada, isla markaana aqlabiyada ugu badan ay halkan ku fadhiyaan, isagoo xusay in ilala 86 Xildhibaan ay madasha joogto, 9 Xildhibaan fasax iyo howlo caafimaad ku maqan yihiin.
Sidoo kale Sheekh Cusmaan ayaa ugu baaqay Xukuumadda Federaalka inay taageeraan is bedelka iyo go’aanka ay gaareen Xildhibaanada ee ay xilka uga qaadeen Madaxweynihii hore ee Hirshabeelle, waxaa uu sidoo kale ugu baaqay beesha caalamka in la taageero go’aanka Baarlamaanka gaaray.
“Go’aan Baarlamaan uu gaaray wax racfaan ah lagama qaadan karo, waa Dastuuri, is bedelka ay sameeyeen ayaa la rabaa inay dowladdu iyo beesha Caalamka taageerto”ayuu yiri Sheekh Cusmaan Barre.
Wasiirada Arrimaha Gudaha iyo Amniga ayaa u sheegay Xildhibaanada inay u yimaadeen magaalada Jowhar sidii ay u qiimeyn lahaayeen xaalada, wixii ay kala kulmaan ay dib ula laabanayaan madaxda dowladda.
Turkish: President Erdoğan condemns Barcelona terror attack, voices solidarity with Spain
Deg deg:Guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabeelle oo Muqdisho looga wacay.